Fomba fijery avy ao Riyadh – Jeans Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2018 9:28 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aprily taona 2005 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tantanin'i Ahmed, mpianatra ho farmasiana ao Riyadh, Arabia Saodita, ny “Saudi Jeans”,bilaogy rohy izay mitovitovy kely amin'ny Scripting News, raha mba nonina tany Afovoany Atsinanana i Dave Winer ary mamaky gazety Arabo am-polony isa-maraina.
Eo amin'ireo lahatsoratra momba ny zava-drehetra avy amin'ny asan'ny SMS ao afovoany atsinanana manohitra ny Etazonia sy ny aspirinina toy ny fisorohana ny fivainganan-drà (anti-coagulant) (izy, no mpianatra momba ny farmasia). Nifantoka tamin'ny lohahevitra roa i Ahmed tato ho ato: ny fivoaran'ny anjara andraikitry ny vehivavy ao amin'ny fiarahamonina Saodiana sy ny firoborobon'ny ISU (Sampana tolotra Aterineto Saodiana) mba hanakanana ireo tranokala izay mahaliana azy ampiasaina.
Ny lahatsoratra vao haingana momba ny vehivavy ao Arabia Saodita dia nanasongadina an'i Ghada al-Idreesi, izay vao avy notendrena ho mpitantana ny foibem-panampiana ny mpanjifa ao amin'ny DHL ao Arabia Saodita, ity ny rohin’ ny lahatsoratra momba ny mety ho fahafahan'ny vehivavy mitondra fiara, ary ny tafatafa nataon'i Al-Hayat tamin'ilay vehivavy mpanoratra Hildaa Ismail.
Tamin'ny herinandro lasa teo, nitaraina mikasika ny fahasarotana amin'ny fidirana amin'ireo tranonkala maromaro i Ahmed, anisan'izany ny TinyURL, Flickr, ary ny ny milina wayback an'i Internet Archive.
Soa ihany fa mbola tsy nakatona ny fidiran'i Ahmed ao amin'ny bilaoginy manokana. Ny fironan'i Ahmed handray mivantana ireo lohahevitra saropady ara–pivavahana sy ara-politika no mahatonga azy ho iray amin'ireo feo mampientanentana indrindra ao amin'ny faritra, saingy azo eritreretina fa tsy maintsy mampitsangam-bolo ny fanehoan-keviny. Ato ny fomba fijeriny momba ny fampiratiana zavakanto vao haingana tao amin'ny sekoly ianarany:
The dean of of College of Pharmacy at KSU have opened an exhibition at the college's main lobby. The exhibition, called “Pulse of the Nation,” is organized by the students’ committees of the college. Please note that when someone says the term “The Nation” in Saudi Arabia, it does not necessary mean the Saudi nation, but it does necessary mean the Islamic nation. Now, one may ask: what an exhibition about Islam has to do with pharmacy?” Here comes the answer: The two have nothing in common. Also, one may thinks College of Pharmacy is filled with atheists, but this is not believable.
Nanokatra fampiratiana tao amin'ny toerana lehibe ao amin'ny oniversite ny sojaben'ny sampana Farmasia ao amin'ny KSU. Ny fampirantiana, antsoina hoe “Pulse of the Nation (Tosiky ny firenena)”, dia nokarakarain'ireo komitin'ny mpianatra tao amin'ny oniversite. Mariho tsara fa raha misy olona milaza ny teny hoe “Ny Firenena” ao Arabia Saodita, dia tsy voatery midika izany hoe firenena Saodiana, saingy midika kosa hoe firenena silamo. Ankehitriny, mety misy manontany hoe: inona no idiran'ny fampirantiana momba ny finoana silamo amin'ny farmasia? “Tonga ny valiny: Tsy misy ifandraisany ny roa tonta. Ary mety misy olona mieritreritra fa feno tsy mpino ny oniversiten'ny Farmasia, saingy tsy azo inoana izany.
Ny antony nanaovana ny fampiratiana toy izany tao amin'ny oniversite dia satria anjakazakan'ny Islamista ireo mpikarakara, ireo komitin'ny mpianatra. Izy ireo no mifehy ireo komity ireo ao amin'ny sampana farmasia, sy ireo kolejy hafa tao amin'ny oniversite, nandritra ny taona maro. Izy ireo no tao ambadiky ny fandraràna ny fampisehoana mozika, tantara an-tsehatra sy ny hetsika ara-kolotsaina hafa. Ity resaka ity no iray amin'ireo nolazain'ny Dr. Hamza al-Mizeini tamin'ny lahatsoratra izay nahatonga ny Islamista iray tao amin'ny oniversite nitory azy.
Ny fitantanana ny oniversite dia tokony handinika ny fanakatonana ireo biraon'ny komity ireo ary hanidy azy ireo, tahaka ny efa nataon'izy ireo tamin'ny biraon'ny mpanolotsaina, satria tsy hitako izay hetsika tena misy ao. Raha ny marina, dia lasa toerana fialan-tsasatra ho an'ireo Islamista ireo birao ireo mba hisotroana zava-pisotro, hihinanana sakafo maivana sy hiresahana ireo vaovao farany momba an'i Sheikh Usama Bin Laden.
Manantena tanteraka izahay fa hanaiky hanoratra hanao fintina ireo bilaogy Arabo lehibe ao Saodita sy ao amin'ny faritra ho an'ny Global Voices i Ahmed.